Showing 81-100 of 3,655 items.
फेरी घट्यो सुनको मुल्य, हेर्नुहोस् प्रतितोलाको कति ?
नेपाली बजारमा सुनको भाउ मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । सोमबार तोलामा ७ सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा ८ सय रुपैयाँ घटेको हो । सोमबार प्रतितोला ९४ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज
ख्रीष्टमसमा विदा दिनु पर्ने माग,धरानमा जनप्रतिनिधीसँग शुभकामना
भीम कुवेर गुरुङधरान ।धरानका ख्रीष्टियनहरुले आफुहरुलाई राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै सरकारले सवै धर्मालम्वीहरुलाई समान व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले आम धर्मालम्बीलाई समान रुपले व्यवहार गर्न भनेर अधि
हेर्नुहोस् आज सुनकाे मुल्य प्रतितोलाको कति ?
नेपाली बजारमा सुनको भाउ मंगलबार मुल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मुल्य तोलामा १ सयले घटेर प्रतितोला ९२ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ । य�
समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई बचाउन मौलिकताको अभियान, मेयर माबुहाङ
तेह्रथुम । समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई संरक्षण गर्न याक्थुङ (लिम्बु) जातिमा मौलिकताको अभियान तीव्र भएको लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयर अर्जुनबाब माबुहाङले बताएका छन् । मौलिक पहिचानसँगै पुख्र्यौली ज्ञान, अनुभव र सीपलाई संरक्ष�
नेपाली बजारमा सुनको भाउ साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि मूल्य घटेको छ । आज सुन प्रतितोला १ सय रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएकोमा सोमबार घटेर ९२ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको नेप�
स्थानिय सरकारले कलाकारहरूलाई व्यवस्था गरेपछि छलफल, सासंद जय कुमार राई
धरान । धरान नृत्य प्रतिष्ठानले कोरोनाका कारण नृत्यकर्मिहरुमा देखिएको प्रभाव बारे विहिबार धरान-९ स्थित तिमल्सिना होटलमा अन्तरक्रिया छलफल गरेको छ । लकडाउनका कारण कलाकार क्षेत्रमा निकै नै प्रभाव परे पछि अन्तरक्रिया छलफल भएको �
प्रकाशित मितिः मंसिर 20, 2077
फेरी सुनको मुल्यमा वृद्धि हेर्नुहोस्, आजको बजार भाउ कति ?
नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार ६०० ले उकालो लागेको छ । बुधबारका तुलनामा आज छापावाला सुन प्रतितोला एक हजार ६०० ले वृद्धि भई ९२ हजार ६०० मा कारोवार भएको छ । बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्र�
इटहरीका गाँउ गाँउमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम
इटहरी । इटहरीका गाँउ गाँउमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई विकेन्द्रित गरिएको छ । अभियानका क्रममा इटहरीका सवै २० वटै वडामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भइरहेका छन । इटहरी उपमहानगरकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमका अनुसार इट�
लोक गायक सुरेश गन्धर्वलाई नेपाल तरुण दलको आर्थिक सहयोग, उपचारका लागि बैंक खाता खोलियो
धरान । नेपाल तरुण दल धरान उमहानगर समितिले बिरामी भएर अस्पतालमा उपचाररत रहेको लोक गायक सुरेश गन्धर्वलाई अस्पतालमै पुगेर आर्थिक सहयोग गरेको छ । उपचाररत लोक गायक गन्धर्वलाई औषधी खर्चको लागि ११ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग ग�
फेरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य, हेर्नुहोस् प्रतितोलाको कति ?
नेपाली बजारमा सुनको भाउ ओरालो लाग्ने क्रमले आज बुधबार पनि निरन्तरता पाएको छ । साताको चौथो कोरोबार दिन बुधबार सुनको भाउ तोलामै १ हजार रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९१ हजार ५०० रुपैयाँ तेजाबी गोल्ड ९�
ह्वातै घट्यो सुनको मुल्य, हेर्नुहाेस् प्रतितोलाको कति ?
नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा १८०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार तोलामा ९४ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य घटेर तोलामा ९२ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको ह�
सुनको मुल्य घट्यो हेर्नुहोस्, आजको बजार भाउ कति ?
नेपाली बजारमा सुनको भाउमा बिहिबार पनि मुल्य घटेको छ । बुधबार तोलामा १ सय रुपैयाले घटेको सुनको मुल्य आज पनि ७ सय रुपैयाले घटेको छ । बुधबार प्रतितोला ९५ हजार १ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर प्रतितोला ९४ �
धरानका कलाकारहरुले ल्याए रमाईलो तिहार बोलको गित ! (भिडियाे सहित)
धरान । धरानका नव कलाकारहरुको सामुहिक आवाज भरिएको रमाईलो तिहार बोलको गित सार्वजानिक भएको छ । दिपावलिको अवसर पारेर शनिबार लक्ष्मि पुजाको दिन उत्त गितसहितको म्युजिक भिडियो सार्वजानिक गरिएको हो । निकेन राईको सब्द र सङ्गित रहेको �
प्रकाशित मितिः मंसिर 1, 2077
धरान । लोक लक्ष्मी स्मृति प्रतिष्ठान धरानले धरान ८ स्थित लाङ्गाली सामुदायिक वनको भवनमा राखिएका असहाय तथा सडक आश्रित मानवहरुलाई निःशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रम दुई महिना पुरा भएको छ । गत असोज १ गतेदेखि धरान उपमहानगरपालिकाको स
झिलिमिलि धरान [ हेराै केहि तस्विरमा ]
धरान । हिन्दू नेपालीहरुको दोस्रो महान पर्व तिहारमा १ नं प्रदेशको जिल्ला सुनसरी धरानमा झिलिमिलि देखिएको छ । बत्ती तथा फुलको पर्वका रुपमा लिईने तिहार उज्यालो उत्सव पनि हो । यतिबेला सबैको घरघरमा झिलिमिलि पारिएको छ । आज शनिबार सा�
प्रकाशित मितिः कार्तिक 29, 2077
'आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ११२ औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै'
काठमाडौँ । नेपाली साहित्यका विराट् प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११२ औँ जन्मजयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । महाकवि देवकोटाको जन्म विसं १९६६ मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्�
जगदिशप्रसाद कुसियैत २०५१ सालको निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग झिनो मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो । पछि भएको उपनिर्वाचनमा भने उहाँले भारी मतले चुनाव जित्नुभएको थियो । त्यसबेला कांग्रेसको किल्लाको
सुनको मुल्यमा वृद्धि हेर्नुहोस्, आजको बजार भाउ कति ?
नेपाली बजारमा सुनको भाउमा उकालाे यात्रा आज शुक्रबार सुनको मुल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ।&nbsp;छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेको हो। शुक्रबारका लागि छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९५ हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको नप�
पौरखी हातहरु: व्यवसायमा जम्दै भरत (भिडियाे सहित)
धरान । धरान &ndash;१५ निवासी भरत श्रेष्ठ धरान &ndash;९ स्थित गणपति एडभटाईजिङ फ्लेक्स प्रिण्टका प्रोपाइटर हुन् । धनकुटामा जन्मिएर सानैमा उनी आफ्नो वुवा आमासँग धरानमा वसाई आए । कुनै पनि काममा निरन्तर लागिरह्यो भने सफलता पाउन सकिन्छ भन्�
‘पाटीका सबै कमिटिलाई चलायमान नबनाउने हो भने फेरी हाम्रो दुर्दशा नै हुन्छ’ (भिडियाे सहित)
पछिल्लो समय यातायात क्षेत्र कोभिडका कारण थला परेको छ । २०७६ चैत्र ११ गते सरकारले लकडाउन गरेसँगै आजका दिनसम्म पनि यातायात क्षेत्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो लामो समयसम्म कोरोनाले थला परेको यातायात क्षेत्र सम्बन्�